Iceland ကို ဘယ်အချိန် သွားရမလဲ- ရာသီမရွေး အလှတရား ခရီးသွားသတင်း
အိုက်စလန်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ခရီးသွားရမလဲ။
လူးဝစ် Martinez | | အကြံပေးချက်များ, Islandia
သင်စဉ်းစားမိပါလျှင် ဘယ်အချိန်မှာ Iceland ကိုခရီးသွားရမလဲပထမဆုံး သတိထားရမယ့်အချက်က ရာသီဥတု ထိုနိုင်ငံမှ ရာသီဥတုဗေဒ အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ သမုဒ္ဒရာအောက်ဝင်ရိုးစွန်းအေးမြပြီး တိုတောင်းသော နွေရာသီနှင့် အေးသော ဆောင်းရာသီတို့နှင့်အတူ၊ သို့သော်၊ နောက်ပိုင်းတွင် Iceland ၏တည်နေရာကိုသင်ထင်ထားသလောက်မကြမ်းတမ်းပါ။ ၏သက်ရောက်မှုများ ပူနွေးသောပင်လယ်ကွေ့ချောင်း အအေးမိခြင်းကို သက်သာစေသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ၎င်း၏ရာသီဥတုသည် နော်ဒစ်နိုင်ငံမှ သင့်အား ပေးဆောင်သည့် သဘာဝအံ့ဖွယ်အမှုများအတွက် တာဝန်ရှိသည်။ အံ့မခန်း ရေခဲမြစ်များနှင့် ရေခဲမြစ်များ. ဒါတွေကို ထည့်ပြောရင် ခံ့ညားပါတယ်။ မီးတောင်များIceland ၏ အဓိကဆွဲဆောင်မှုတစ်ခုသည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်သဘာဝဖြစ်သည်ကို သင်နားလည်လိမ့်မည်။ ဘယ်လိုအခြေအနေပဲဖြစ်ဖြစ်, အဲဒီမြေတွေကို အချိန်မရွေးသွားလည်လို့ကောင်းပါတယ်။. ဒါကြောင့် Iceland ကို ဘယ်အချိန်သွားလည်ရမယ်ဆိုတာ ရှင်းပြတဲ့အပြင် နှစ်တစ်နှစ်ရဲ့ ရာသီတစ်ခုချင်းစီမှာ နိုင်ငံအတွက် ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာ အကြံပြုချင်ပါတယ်။
1 ဆောင်းရာသီတွင် Iceland သို့ ခရီးသွားပါ။
2 နွေရာသီ၊ အိုက်စလန်သို့ ခရီးသွားရမည့်အချိန်အတွက် အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်
2.1 Reykjavik၊ နှစ်၏အချိန်မရွေး
3 နွေဦး သို့မဟုတ် ဆောင်းဦးတွင် အိုက်စလန်သို့ ခရီးသွားပါ။
ဆောင်းရာသီတွင် Iceland သို့ ခရီးသွားပါ။
ရင်သပ်ရှုမောဖွယ် Northern Lights
အအေးဒဏ်ကို မကြိုက်ရင် ဆောင်းရာသီမှာ Nordic နိုင်ငံကို သွားလည်လို့ရပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း၊ အပူချိန်သည် အခြားနိုင်ငံများတွင် အလားတူ လတ္တီတွဒ်နှင့် လောင်ဂျီတွဒ်တို့ကဲ့သို့ မနိမ့်ပါ။ ဥပမာ, နော်ဝေ o Suecia. အကြောင်းပြချက်မှာ ၎င်း၏အနောက်နှင့် တောင်ဘက်ကမ်းရိုးတန်းများသည် ကာရေဘီယံမှလာသော အထက်ဖော်ပြပါ ပင်လယ်ကွေ့ရေစီးကြောင်းမှ ရေချိုးနေသောကြောင့်ဖြစ်ပြီး အခြားတစ်ခုလည်းရှိသေးသည်။
အိုက်စလန်သည် ကမ္ဘာပေါ်တွင် အပူဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ တစ်ခုရှိ ကြီးမားသော ဘူမိအပူဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုမီးတောင်များ၊ ရေပူစမ်းများနှင့် ရေအိုင်များရှိသည်။ သို့သော်၊ ဤအရာအားလုံးရှိနေသော်လည်း၊ ဆောင်းရာသီတွင်အအေးဓာတ်ကိုဖယ်ရှားရန်မမျှော်လင့်ပါနှင့်။
ရဂ်ဂျူဗစ်နိုင်ငံ၏မြို့တော်၊ အအေးပိုင်းရာသီတွင် ပျမ်းမျှအပူချိန်သည် သုညအထက် တစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ် သို့မဟုတ် နှစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင်ရှိပြီး အနုတ်ဆယ်ခုအထိ ရောက်ရှိနိုင်သည်။ ထို့အပြင် အနောက်ဘက်ခြမ်းသည် ဆီးနှင်းများကျနေသဖြင့် အထီးကျန်ဖြစ်နေသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ၊ အိုက်စလန်၏ ရာသီဥတုသည် အလွန်ပြောင်းလွဲသည်။ တကယ်တော့ ရာသီဥတုကို မကြိုက်ရင် ငါးမိနစ်လောက်စောင့်ပါလို့ တိုင်းသူပြည်သားတွေကြားမှာ ပြောနေကြတဲ့ စကားတစ်ခွန်းရှိပါတယ်။ သို့ပြောင်းပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ ဆောင်းရာသီသည် အိုက်စလန်၏ အဓိကဆွဲဆောင်မှုအချို့ကို ခံစားရန် သင့်အတွက် အကောင်းဆုံးအချိန်ဖြစ်သည်။ ထင်ရှားကျော်ကြားတဲ့ ကိစ္စပါ။ Aurora borealis. ၎င်းတို့ကို Reykjavík မှပင် ကျွန်းတစ်ခွင်လုံးတွင် မြင်နိုင်သည်။ ဒါပေမယ့် ဒီအံ့ဖွယ်ဖြစ်ရပ်ကို စောင့်ကြည့်ဖို့ ပိုကောင်းတဲ့ သဘာဝနယ်မြေတွေရှိတယ်။
မြောက်ဘက်မီးများသည် မြောက်ဘက်တွင် ပေါ်လာသည်။ ထို့ကြောင့်၊ အိုက်စလန်၏ နယ်မြေသည် ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်ကျက်သရေအားလုံးကို မြင်ရန် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။ အတိအကျပြောရရင် သူတို့ကို မြင်နိုင်စေမယ့်အပြင် တကယ်ကို ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ နေရာတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ၎င်းသည် ကိစရိ၊ kirkjufell တောင်ခရီးသွားလုပ်ငန်းအတွက် အထင်ရှားဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။
အမြင့် 463 မီတာသာရှိပြီး ထူးဆန်းသောပုံသဏ္ဍာန်ရှိပြီး ၎င်း၏ဘေးတွင် လှပသောရေတံခွန်တစ်ခုရှိသည်။ ဤအရာအားလုံးတွင် မြောက်ဘက်မီးများကို ပေါင်းထည့်ပါက သင့်တွင် အိပ်မက်ကဲ့သို့ ရှုခင်းများပါရှိမည်ဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း ရှိတယ်။ Hvitserkur သူတို့က ဒီဖြစ်စဉ်ကို ဆင်ခြင်ဖို့ ပြီးပြည့်စုံတယ်။ ၎င်းသည် နဂါးအရက်သောက်ခြင်းနှင့် ဆင်တူသည့် ထူးခြားသော ကျောက်သားအထွက်ပေါက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
အတိုချုပ်ပြောရရင် မြောက်ပိုင်းအလင်းတွေကို ကြည့်ဖို့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့နေရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကျနော်တို့က ဖော်ပြပါမယ်။ Skardsviti မီးပြတိုက်သဘာဝတရားနဲ့ အပြည့်အ၀ သဟဇာတဖြစ်မယ့် အထီးကျန်နေရာဖြစ်ပြီး အခြားနေရာအနည်းငယ်မှာလို ဖြစ်စဉ်ရဲ့ ရူပါရုံကို ခံစားရမှာပါ။
အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ သင်သည် မြောက်ဘက်၏ရာသီဥတုထက် ရာသီဥတုပိုမိုအေးမြသောကျွန်း၏တောင်ဘက်ကိုသိရန် ဆောင်းရာသီတွင် Iceland သို့သွားရောက်လည်ပတ်မှုကိုလည်း အခွင့်ကောင်းယူနိုင်သည်။ ဒါမှ လာလည်လို့ရတယ်။ Vatnajökull ရေခဲမြစ်ဥရောပတစ်ခွင်လုံးတွင် အကြီးဆုံးဖြစ်သည်။ အံ့သြဖွယ် Gullfoss ရေတံခွန်အနံ မီတာ သုံးဆယ်ခန့်၊ အဆိုပါ ရေတံခွန်ဧရာမ ဂီဇာ သို့မဟုတ်၊ Thingvellir လွင်ပြင် ဒါမှမဟုတ် ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ရေကန်တွေကို အပေါ်စီးကမြင်နေရတဲ့ လွှတ်တော်၊
ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ ပြောမယ့် Reykjavík ကိုယ်တိုင်က တောင်ဘက်မှာရှိတဲ့ မြို့တွေကို သွားလည်လို့ရပါတယ်။ Kopavogurစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ သဘာဝသမိုင်းပြတိုက်ရှိရာ၊ ဒါမှမဟုတ် HafnarfjordurSan José ၏ဘုရားကျောင်းကိုသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည့်နေရာ၊ သို့သော်အားလုံးထက်ထူးခြားစွာတက်ရောက်နိုင်သည်။ ဗိုက်ကင်းပွဲတော် နှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိသော။
နွေရာသီ၊ အိုက်စလန်သို့ ခရီးသွားရမည့်အချိန်အတွက် အကောင်းဆုံးအကြံပြုချက်
အိုက်စလန်ကို ဘယ်အချိန်သွားလည်ရမယ်ဆိုတာ အခုအချိန်အထိ ပြောပြထားပေမယ့်၊ အကောင်းဆုံးအချိန်ကတော့ နွေရာသီပါပဲ။ နိုင်ငံ၏ဧရိယာပေါ်မူတည်၍ ပျမ်းမျှဆယ့်နှစ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ဝန်းကျင်ရှိသော်လည်း အပူချိန်သည် ပို၍သာယာပါသည်။
Northern Lights များကို မြင်တွေ့နိုင်ပြီး ဆိုးရွားသော ရာသီဥတုတွင် မြင်ရန်ခက်ခဲသော တောင်တန်းများနှင့် မြောက်ဘက်ဒေသများသို့လည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အိုက်စလန်ကျေးလက်၏ ရိုးရာသွင်ပြင်များကို ထိန်းသိမ်းထားသည့် တံငါရွာလေးများ။
ဒါဟာအမှုဖြစ်ပါသည် မင်အစာကျွေးရန် Skjálfandi ပင်လယ်အော်သို့ ရောက်လာသော ဝေလငါးများကို ကြည့်ရှုရန် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အကောင်းဆုံးနေရာများထဲမှ တစ်ခုဟု သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ နွေရာသီတွင် puffins ပေါများသောကြောင့်, Ornithology ဝါသနာရှင်များသည်နေထိုင်သူနှစ်ထောင်နီးပါးရှိသောဤမြို့ကိုခံစားနိုင်သည်။
မင်းသွားလည်ဖို့ ထိုက်တန်တဲ့ နောက်ထပ်မြို့ငယ်လေးတစ်ခုပါ။ SiglufjordurTrollaskagi ကျွန်းဆွယ်တွင်၊ ၎င်း၏သမိုင်းဝင်သစ်သားအိမ်ဟောင်းကို တောက်ပသောအရောင်များဖြင့်ခြယ်သထားသည်။ ထို့အပြင်၊ ၎င်းတွင် မကြာသေးမီကာလအထိ ငါးဖမ်းခြင်းခံခဲ့ရသည့် Herring Era ၏ထူးခြားသောပြတိုက်တစ်ခုရှိသည်။
ပိုအရေးကြီးတာက မြို့ပါ။ Aureyri လူဦးရေ နှစ်သောင်းမျှသာ ရှိသော်လည်း နိုင်ငံ၏ မြောက်ဘက် မြို့တော်ဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ ခံ့ညားထည်ဝါသော အနောက်ဘက်တွင် တောင်တန်းများ ဝန်းရံထားသည်။ Eyjafjour Fjord နှင့် ကမ်းစပ်တွင်၊ Glera မြစ်. ၎င်းသည် ယနေ့ခေတ် ဗိုက်ကင်းရှေးဟောင်းအခြေချနေထိုင်ရာ နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ god thor. ၎င်း၏ ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကိုလည်း သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ဘုရားရှိခိုးကြောငျး နှင့် ရုက္ခဗေဒဥယျာဉ်တော်. သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် Icelandic မြို့များအကြောင်းပြောနေကြသောကြောင့် နိုင်ငံ၏မြို့တော် Reykjavík တွင် မြင်တွေ့ရမည့်အရာများကို ရှင်းပြရန်အချိန်တန်ပြီဖြစ်သည်။
အဓိက Icelandic မြို့ကို အချိန်မရွေး သွားလည်လို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် မင်းရဲ့အထိန်းအကွပ်တွေအားလုံးကို မြင်ချင်ရင်၊ အပူချိန်က မင်းလမ်းတွေပေါ်မှာ အချိန်ပိုကြာအောင် ကူညီပေးတဲ့အခါ နွေရာသီမှာ သွားရတာ ပိုကောင်းပါတယ်။ လူဦးရေ နှစ်သိန်းအောက်သာရှိသဖြင့် ၎င်းသည် သင့်အား ပေးဆောင်ရန် များစွာရှိနေပါသည်။
အဆောက်အဦများကို လည်ပတ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ ပါလီမန်လွှတ်တော် နှင့် အစိုးရအိမ်နှစ်ခုလုံးက XNUMX ရာစုကနေ။ Miöborg ၏တူညီသောခရိုင်တွင်၊ ဤအရာများနှင့်အလွန်နီးကပ်သည်။ စာကြည့်တိုက် နှင့် အမျိုးသားပြဇာတ်ရုံ. သို့လည်း သွားရောက်လေ့လာသင့်သည်။ အိုက်စလန်အမျိုးသားပြတိုက် နှင့် နော်ဒစ်အိမ်ဗိသုကာပညာရှင်၏လက်ရာ Alvar Aalto.
ဒါပေမယ့် ရိုးရာအရှိဆုံး Reykjavík ကိုသိချင်ရင် မြို့ဟောင်းအပြင်၊ Arbaer ရိုးရာပြတိုက်မြို့ငယ်လေးတစ်ခုလုံးကို အသန့်ရှင်းဆုံး မူလပုံစံဖြင့် ပြန်လည်တည်ဆောက်ထားသည်ကို သင်တွေ့နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ မြို့ရဲ့ ဘာသာရေး အထိမ်းအမှတ် အဆောက်အအုံတွေကို ကြည့်ဖို့ အကြံပြုချင်ပါတယ်။ ဘုရားကျောင်းဟောင်း၁၈ ရာစုမှစ Reykjavik အခမဲ့ဘုရားကျောင်း. သို့သော်၊ အားလုံးထက်၊ အထင်ကြီးစရာ Hallgrímskirkja ဒါမှမဟုတ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသစ်၊ အရှေ့ဘက်မှာ အထင်ကြီးလောက်စရာ အဆောက်အဦတစ်ခုရဲ့ ရုပ်တုတစ်ခုကို သင်တွေ့လိမ့်မယ်။ Erik အနီရောင်အိုက်စလန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ၁၀ ရာစု နော်ဝေ သင်္ဘောသား စွန့်စားခန်း။ ဒါပေမယ့် မြို့မှာလည်း လှပတဲ့ ကက်သလစ် ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၊ ခရစ်တော်၏ဘုရင်ဖြစ်သည်။.
နွေဦး သို့မဟုတ် ဆောင်းဦးတွင် အိုက်စလန်သို့ ခရီးသွားပါ။
ဤအခြေအနေတွင်၊ ဆောင်းရာသီတွင် Vatnajokull ဧရိယာ၊
အိုက်စလန်ကို ဘယ်အချိန်ခရီးသွားရမယ်ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဒီရာသီနှစ်ခုက သင့်ကို အကြံပေးဖို့ကောင်းပါတယ်။ တကယ်တော့ ခရီးသွားဧည့်သည် အနည်းဆုံးဖြစ်တာ၊ ဈေးနှုန်းတွေက ပိုသက်သာတယ်။ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု နှစ်ခုလုံးတွင် လိုချင်တပ်မက်ဖွယ်ရာ မြောက်ဘက်အလင်းရောင်များကို သင်မြင်နိုင်သည်။ မလုံလောက်ပါက၊ ဆောင်းဦးသည် သင့်အား အပင်များ၊ ရေညှိများနှင့် ချော်ရည်များ ရောနှောထားသော တောင်များနှင့် လွင်ပြင်များရှိ သဘာဝအရောင်များကို ပေးစွမ်းသည်။
အပူချိန်သည် သုညမှ ဆယ်ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ကြားတွင် ကွဲပြားသောကြောင့် ရာသီနှစ်ခုလုံးတွင် အလွန်တူညီပါသည်။ သူတို့၏ နေ့ရက်များသည် ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အတိအကျ မတိုက်ဆိုင်သည်မှာ မှန်ပါသည်။ အိုက်စလန်တွင် ဆောင်းဦးရာသီသည် သြဂုတ်လနှောင်းပိုင်းတွင် စတင်ပြီး နိုဝင်ဘာလအစောပိုင်းတွင် ပြီးဆုံးသည်။ ၎င်း၏ တစ်ခုတည်းသော အားနည်းချက်မှာ ၎င်းသည် တစ်ခုဖြစ်သည်။ လေထန်သောရာသီသင်၏လေ့လာရေးခရီးကို ခက်ခဲစေနိုင်သည်။ ဤအချိန်တွင် ပြီးဆုံးသွားသော လှုပ်ရှားမှုများ ရှိနေကြောင်းကိုလည်း သတိပြုသင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူ့ကို အပျော်ဖောင်စီးခြင်း မြစ်များတွင် သို့မဟုတ် အမြင့်ဆုံးမြေများသို့ လေ့လာရေးခရီးများ။
၎င်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်၊ အိုက်စလန်ဒီနွေဦးသည်ဧပြီနှင့်မေလအကြားတိုးချဲ့သည်။ ဧပြီလ 18 ရက်နေ့ကို နွေရာသီ ပထမနေ့ကို တိုင်းသူပြည်သားများက ကျင်းပကြသော်လည်း မလှည့်စားကြပါ။ ယင်းအစား နွေဦး၏အစဖြစ်သည်။ တစ်ဖက်တွင်၊ ရံဖန်ရံခါ နှင်းကျတတ်သော်လည်း ရှားပါသည်။ ယင်းအစား၊ အချိန်အခါဖြစ်သည်။ ရွှေ့ပြောင်းငှက်များကို စတင်မြင်တွေ့လာရသည်။. သိချင်စိတ်တစ်ခုအနေဖြင့်၊ ဥရောပရွှေရောင်စုံသည် အိုက်စလန်သို့ နွေဦးပေါက်လာစေရန် စဉ်းစားနေကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့ပြောပြပါမည်။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကျော်ကြားဆုံး မျိုးစိတ်များ ရောက်ရှိလာသည်။ puffinငါတို့က မင်းကို ပြောထားပြီးသား။
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့် သင့်မေးခွန်းကို ကျွန်ုပ်တို့ ဖြေကြားပေးမည်ဟု မျှော်လင့်ပါသည်။ ဘယ်အချိန်မှာ Iceland ကိုသွားမလဲ။. ငါတို့ပြောသလိုပဲ၊ အကောင်းဆုံးအချိန်ပဲ။ နွေရာသီ. ဒါပေမယ့်လည်း နွေဦးနဲ့ ဆောင်းဦးရာသီက သင့်အတွက် သာယာတဲ့ အပူချိန်ကို ယူဆောင်လာပေးပါတယ်။ ဆောင်းရာသီမှာတောင် Nordic ကျွန်းကို သွားလည်ဖို့ အချိန်ကောင်းပါပဲ။ မြတ်စွာဘုရားကို စောင့်ရှောက်ခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သောကြောင့်တည်း။ Aurora borealis. ဒါ့အပြင် ခရီးစဉ်နဲ့ တည်းခိုခက စျေးသက်သက်သာသာနဲ့ နှင်းတွေကျနေတဲ့ ရှုခင်းတွေကို နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့ အလှတရားကို တန်ဖိုးထားဖို့ အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ ၎င်း၏ရေခဲမြစ်များနှင့် fjordsငြူစူစရာမရှိသော၊ နော်ဝေက သူတွေ. ထို့ကြောင့် သင်အလိုရှိတိုင်း အိုက်စလန်သို့ သွားရောက်ပါ၊ သို့သော် ၎င်းကို မရပ်တန့်ပါနှင့်။ ငါတို့ပေးထားတာတွေက မင်းကိုသွားဖို့ လုံလောက်တယ်လို့ မင်းမထင်ဘူးလား။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Islandia » အိုက်စလန်ကို ဘယ်အချိန်မှာ ခရီးသွားရမလဲ။